नेपालमा इसाईकरण : धार्मिक द्दन्द्द निम्त्याउने योजना, काहाँवाट छिर्याे वाइवल ?::त्रिशुलीखवर
इसाईहरु नेपालको गरिविसँग सेन्टिमेन्टका रुपमा आफनो साम्राज्य विस्तार गर्न खोजिरहेका छन् । गरिव जनताका भावनामाथी उनीहरुले आफनो वक्रदृष्टिलाई मिसाउन खोजिरहेका छन्
नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाल धर्मरिपेक्ष राष्ट घोषणा भएको हो । हुन त माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध र ०६२/०६३ सालको १९ दिने जनआन्दोलनको माग धर्मनिरपेक्ष राज्य वनाउने थिएन । तर पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियाको चरणसँग–सँगै एकाएक धर्म निरपेक्ष राष्ट घोषणा भयो । यो अवस्था कसरी आयो ? पक्कै पनि त्यो अवस्था आउनुमा अनेकन चलखेलका तानावाना वुनिएको र त्यही अनुसारको श्रृंखलाहरुलाई जोडिएको प्रष्टै वुझन सकिन्छ ।
धर्म निरपेक्षता को अर्थ सवै धर्म वरावर वा समान भन्ने हो । समान्य अर्थमा पनि यसलाई यसैगरि अथ्र्याउन सकिन्छ । र त्यही नजरवाट हेर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा धर्म निरपेक्षतालाई सवै धर्मलाई समान नजरवाट हेर्ने भन्दा पनि हिन्दु विरोधी मानसिकतामा नेपाली – नेपालीहरुलाई एक आपसमा लडाई द्दन्द्द निम्त्याउने र फुटाऊ र शासन गर भन्ने स्रामाज्यवादीहरुको रणनीतिक उदेश्यसँग जोडिएर प्रवेश पाएको छ । यसलाई त्यही रणनीतिक अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरिएको देखिन्छ ।
नेपाल एउटा यस्तो देश हो, जुन नाम हिन्दुहरुको १८ पूराणहरु मध्ये एकन्द पूराणवाट लिईएको नाम हो । हिन्दुहरुको १८ पूराणलाई मान्ने हो भने नेपाल भन्ने वित्तिकै हिन्दु भन्ने वुझिन्छ । नेपालमा आपसी सदभाव र सहिष्णुताका साथ वसिरहेका वुदिष्ट र हिन्दुहरुलाई लडाई नेपाललाई कमजोर वनाउँदै धार्मिक द्धन्द्धमा फसाई सखाप पार्ने सामा्राज्यवादी रणनीति र उदेश्यका साथ आन्दोलनको माग विपरितको धर्म निरपेषताको माग उठाएर कतै धर्म निरपेक्ष राष्ट घोषणा गरिएको त होइन ? अहिले शंका गनृे प्रसस्त आधारहरु देखा पर्न थालेको छ ।
तर धर्म निरपेक्ष फेरि आफैमा नराम्रो भने होइन । यसलाई सफल वनाउने, असफल वनाउने या कुन रुपमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा यसलाई प्रयोग गर्नेहरुमा निर्भर गर्दछ । छिमेकी राष्टहरु र सार्क राष्टहरु एउटा पनि इसाई राष्ट नभएको अवस्थामा नेपालमा वाइवल कसरी र काहाँवाट आयो ? प्रश्न विचरणीय छ ।
इसाईहरुको गाउँ गाउँसम्म तिव्र गतिमा पुगेको विस्तार, नेपालको गरिवि, अभाव आदीवाट पिल्सिएका समाजमा उनीहरुले देखाएको चासो यी सवै हेर्दा देखिन्छ, उनीहरु नेपालका गरिविसँग सेन्टिमेन्टका रुपमा आफनो साम्राज्य विस्तार गर्न खोजिरहेका छन् । गरिव जनताका भावनामाथी उनीहरुले आफनो वक्रदृष्टिलाई मिसाउन खोजिरहेका छन् । त्यक्तिमात्र होइन, नेपालमा सदियौं देखि मिलेर वस्दै आएका हिन्दु र वुदिष्टहरुका वीचमा झै झगडा पारिदिने र एक आपसमा लडाएर आफनो कुचेष्टा पूरा गर्ने कुनियत राख्दैछन् । केही समय अगाडी चर्चामा आएको वा जर्वजस्त रुपमा अनेक वाहानावाजीका साथ उठाउन खोजिएको ‘गाईकान्ड’ लाई त्यही रुपमा वुझन सकिन्छ ।
साम्राज्यवादीका डिजाइनका रुपमा इसाई धर्मका प्रचारका लागि जतिसुकै वहानावाजी गदै हिन्दु र वुदिष्ट लडाउन उनीहरुले आफनो अस्त्र प्रयोग गरेपनि सफल भएनन र हुदैनन पनि । नेपाल यस्तो देश हो जाँहा सवै जात– जाति, भाषा–भाषीहरु वीच धार्मिक सदभाव र सहिष्णुता कायम छ ।
कुनै समय नेपोलियन वोनापार्टले भनेका थिए,–‘यदि कुनै राष्टलाई कमजोर वनाउनु छ भने सवैभन्दा पहिले त्यस देशको धर्म, भाषा, सस्कृति र परम्परामाथी प्रहार गर्नुपर्छ ।’ आज इसाईहरु वोनापार्टको त्यही भनाईलाई मुल मन्त्र ठान्दै आफनो अस्त्र प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् । त्यसै अनुरुप नेपालमा वुदिष्ट र किराँतीहरुको सस्कृति र पहिचानलाई निर्मुल पार्न खोजिरहेका छन् । नेपालका वुदिष्टहरु तिब्यतियन वुदिष्टतिर पलायन हुदैछन् । जसरी यूरोप र अमेरिकाले स्वतन्त्र तिब्बतको नाममा तिब्बती वुदिष्टहरुलाई ठूलो धनराशी लगानी गरेर चीनको विरुद्ध लडाईरहेको छ त्यसैगरि हिन्दुहरुको वाहुल्य भएको देश नेपालमा इसाईहरु चर्च स्थापित गर्न युद्ध स्तरमा लागिरहेको छ । ऊ सेनालाई समेत प्रयोग गरी नेपाललाई हाइटी, रुवान्डा जस्तो छिन्नभिन्न पार्न चाहान्छ ।
इसाईहरु आज मात्र होइन, पहिले देखि नै नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजिरहेका थिए तर सफल भईरहेका थिएनन । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि झनै उनीहरु खासै सक्रिय हुन सकेनन् । तर १० वर्षको जनयुद्धको चपेटामा नेपाल परिरहदा भने उनीहरुले प्रवेश गर्ने अवसर पाए । अझ २०६२/०६३ को जनआन्दोलन प्रश्चात सहजै उनीहरुले नेपाल भित्रिएर आफनो सन्जाललाई विस्तार गर्न सफल भए ।
नेपाल एकीकरणको समयमा देश निकाला गरिएका दलमर्दन शाहलाई प्रयोग गरि इष्ट इन्डिया कम्पनीले वहादुर शाहलाई सिध्याउन सफल भए भने नेपालले आफनो दुई तिहाई भू–भाग समेत गुमायो । इसाईहरु हाम्रा वीर पूर्खाहरुले दुःखले अर्जेको मुलुकमा वहुवलीमा अस्त्र प्रयोग गदै अखण्ड नेपाललाई चकनाचुर पार्न उद्यत छन् । नेपालको सनातन हिन्दु, वौद्ध, किराँत, वोन लगायतका मौलिक परम्परा र सस्कृतिलाई नष्ट पादै वाइवल (इसाई) स्थापित गर्न चाहान्छन् ।
बुद्धको देशमा उनीहरु वुद्धको धर्म र वुद्धको इतिहास नै नष्ट गरि समाप्त पार्न लागि परेका छन् । इसाईहरु विशेषत राई, लिम्वु, शेर्पा र तामाङ समुदायहरुलाई आफनो हतियारका रुपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् । इसाईहरुको साम्राज्यवादी रणनीतिलाई वेलैमा वुझेर उनीहरुको रणनीतिक कुन्सित उदेश्यलाई सफल हुन दिनु हुदैन । हामीले हाम्रो आफ्नो सस्कार, परम्परा तथा सस्कृतिलाई विर्सनु हुदैन । हामीले आफनो इतिहास वचाउन लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।
यस विषयमा सवै नेपाली सचेत हुनु पर्ने देखिन्छ । लोभ लालचमा फस्नु भन्दा पनि आफनो इतिहास वचाउनु नै हाम्रो अहिलेको कार्यभार हुन आँउछ । यो हाम्रा लागि चुनोतिपूर्ण हुन आईरहेको छ । अर्काको धर्म, सस्कृति र परम्परा अपनाउनु भन्दा आफनो देशको मोलिकता वचाउनु नै एक सच्चा नेपालीको दायित्व हुन आउँछ । यसतर्फ सवैले वेलैमा सोच्न जरुरी छ ।